March 13, 2018 – अनलाइन खबर
रेसुङ्गा वनमा भिषण आगोलागी, आगो नियन्त्रणको लागि सिडिओसहित सेना-प्रहरी जाँदै
No Comments on रेसुङ्गा वनमा भिषण आगोलागी, आगो नियन्त्रणको लागि सिडिओसहित सेना-प्रहरी जाँदै
गुल्मी । आज साँझपख गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास निजिकै रहेको रेसुङ्गा वन क्षेत्रको गौशलाबाट सल्कीएको आगो यति वेला जताततै फैलिएर भिषण बनेको छ । आगो स्थानियका नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि अहिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र तम्घास वजारवासी नियन्त्रणका लागि आफुहरु त्यस तर्फ जाँदै गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । गुल्मीको धागीधुम ब्यारेकमा रहेको नेपाली सेना विरभद्रजंग गुल्मबाट सुरु मै एक सेक्सन टोली उपसेनानी सुरेन्द्र थापा क्षेत्रीको कमाण्डमा त्यस तर्फ पठाईएको गुल्मीपति सेनानी जनमतबहादुर […]
दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारी थप पाँच बर्ष अभिभावकीय भूमिकामा
No Comments on दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारी थप पाँच बर्ष अभिभावकीय भूमिकामा
Live century-bank दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारी थप पाँच बर्ष अभिभावकीय भूमिकामा Posted By News24Nepal.TV || Date: 13 March, 2018 290 SHARES FacebookTwitterGoogle+Email काठमाडौं । राजनीतिमा एकपछि अर्को खुड्किलो उक्लने सीमित महिलामध्ये एक हुन् विद्यादेवी भण्डारी । पति मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी भण्डारीले पार्टी, संसदीय राजनीति र राजकीय जिम्मेवारीमा एकपछि अर्को फड्को मारिरहेकी छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै भण्डारीले थप पाँच बर्ष अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै छिन् । एक रिपोर्ट […]
No Comments on रक्षामन्त्री पोखरेलसँग राजदूत पुरीको भेट
काठमाडौँ : रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा मन्त्री पोखरेलले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको र यस प्रकारको सम्बन्ध दुवै देशका सरकार र जनताबीच मात्र नभई प्रकृति प्रदत्तरुपमा नै विकास हुँदै गएको बताउनुभयो । नेपाली सेनाको क्षमताको विकासका लागि भारत सरकारले पु¥याउँदै आएको सहयोग र सद्भावप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि निरन्तर सुमधुर सम्बन्ध रहने अपेक्षा राख्नुभयो । राजदूत पुरीले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध […]
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जिरो २ र २ जिरो के हो जसको कारणले पाइलटले गलत निर्णय लिए ?
No Comments on अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जिरो २ र २ जिरो के हो जसको कारणले पाइलटले गलत निर्णय लिए ?
काठमाडाैं, फागुन २८ – सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएको यूएस बंगला विमानका पाइलट र कन्ट्रोल रुमबीच भएको सम्वाद सार्वजनिक भएको छ । संवादमा जिरो २ र २ जिरोमध्ये कुन ठाउँबाट विमान अवतरण गर्ने भन्नेबारे लामो बहस सुन्न सकिन्छ । कन्ट्रोल रुमले २ जिरोबाट अवतरण गर्न भनेपनि पाइलटले २ जिरोमै अवतरण गराउँछु भनेपछि अन्त्यमा कन्ट्रोल रुमले अनुमति दिन्छ । तर अवतरणलगत्तै विमान दुर्घटना हुन पुग्छ । विमानस्थलको जिरो २ र २ जिरो भनेको के हो त ? विमानस्थल […]
जङ्गल भएको आगलागीमा दशको मृत्यु
No Comments on जङ्गल भएको आगलागीमा दशको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । दक्षिण भारतीय राज्य तामिल नाडूको एक जङ्गलमा भएको आगलागीमा परी ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या १० पुगेको छ । केही दिनयतादेखि जारी रहेको सो डढेलोमा परी ज्यान जानेको संख्या १० पुगेको अधिकारीहरुले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन् । उक्त जंगलमा आइतबारबाट आगलागी सुरु भएको हो । आगलगी सुरु भएको सो समयमा एक विश्वविद्यालयका ४० जना विद्यार्थी पनि सोही जंगलमा पदयात्रामा गएका थिए । उनीहरुलाई भने उद्वार गरिएको छ । सो जंगलको डढेलो निभाउन ठूलो प्रयास भइरहेको छ […]
बंगला एयरलाइन्सको भनाई- एटिसीको गलत निर्देशनको कारण विमान दुर्घटना
No Comments on बंगला एयरलाइन्सको भनाई- एटिसीको गलत निर्देशनको कारण विमान दुर्घटना
सोमबार काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको विमान दुर्घटनामा विमानस्थल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरुम (एटिसी)को कमजोरी भएको बंगला एयरलाइन्सले जनाएको छ । एयरलाइन्सका प्रमुख इमरान असिफले बताए अनुसार चालक तथा विमानको कुनै खराबी नभएको बरु एटिसीले दिनपर्ने सही जानकारी नदिएको कारण उक्त दुर्घटना हुन पुगेको बताए । ढाका स्थित युएस बंगलाको कार्यालयमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।उनले ढाकाबाट सुरक्षीत उडान भरेको विमान र विमान चालकमा कुनै समस्या नभएको बरु काठमाडा स्थीत ट्राफिक कन्ट्रोलबाट नै गलत […]
अमिताभको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुटिङ सेटमै डाक्टर पुगे
No Comments on अमिताभको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुटिङ सेटमै डाक्टर पुगे
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको स्वास्थ्य अवस्थामा खराबी आएको छ । फिल्म ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’को सुटिङ सेटमा रहेका अमिताभको स्वास्थ्यमा खराबी आएपछि सुटिङ स्थलमै डाक्टरहरुको टिम पुगेको जानकारी गराइएको छ । यो समाचार अमिताभले आफैले आफ्नो ब्लगमा पोस्ट गरेका छन्। अमिताभको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएमा उनी फेरि सुटिङ सेटमा फर्कनेछन्। अमिताभको चेकजाँचका लागि डाक्टरहरुको एक टिम मुम्बर्इबाट सुटिङ स्थल जोधपुर पुगिसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
No Comments on व्यवसायीमाथि गोली प्रहारको घटनामा पीडितलाई नै दुःख दिइयो
भैरहवा । भैरहवाका व्यवसायीमाथि लक्षित गरि सोमबार राति गोली प्रहार गरेको र प्रहरीले उल्टो पीडितलाई केरकार गरेको भन्दै विरोधमा भैरहवा बजार बन्द गरिएको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका कार्यसमिति सदस्य हरिष सेठिया माथि भएको गोली प्रहार र प्रहरीले पीडितलाई थप दुःख दिएको तथा चोरी डकैती बढेको भन्दै संघले मंगलबार भैरहवा बजार बन्द आह्वान गरेको छ । सोमबार राति करिब ८ः४० बजे आफ्नो व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट घरतर्फ जाँदै गर्दा संघका सदस्य तथा भैरहवा बैंक रोडका मोबाइल व्यवसायी ३८ […]
१, शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने । २, सामान्यता अत्यधिक नूनको प्रयोगले उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउने भएकाले खराब मानिन्छ । त्यसैले खानामा नुनको मात्रा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर अत्यधिक चिनीको उपभोग तथा खराब किसिमका वा ग्लाईसिमिक इन्डेक्स धेरै भएको अवस्थामा कार्बोहाइड्रेटको पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ३, स्याचुरेटेड फ्याट र ट्रान्स फ्याटको सट्टा मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याटको प्रयोग गर्ने । ओलिभ आयललाई सलादसँग नियमित रुपमा उपयोग गर्ने मेडिटेरीयन क्षेत्रका बासिन्दामा हृदयाघात तथा मुटुका अन्य समस्या कम पाईन्छ । गुणस्तरीय एक्स्ट्रा भर्जिन […]
No Comments on नेपालका व्यवसायी पिण्टुलाई गोली प्रहार गर्ने भारतीय पक्राउ
बुटपल । रुपन्देहीका व्यवसायी हरिस सेठिया पिण्टु माथि गोली प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार भारतको महाराजगञ्ज कोतवाली नौतनहवाका ४६ वर्षीय रामजान मुसलमानलाई घरेलु कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ गरिएको हो । भैरहवाको वैङकरोडमा रहेको करणी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक ३८ वर्षीय सेठिया पसल बन्द गरी स्कुटरमा चढेर घर गइरहेको बेला सिद्धार्थनगर –५, सेवापथमा सोमबार बेलुका गोली प्रहार भएको थियो । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सघंका नव निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका सेठियामाथि […]